बोस्टनका नेपाली माथि बालिका बलात्कारको अभियोग पछि फरार
नेपालीले हप्ताको २८,००० डलर कमाएर फेसबुक स्टाटसमा राख्दा
एनआरएनको नाममा मानव तस्करी धन्दा
अमेरिकामा नेपाली चेली रिनाको हत्या ,आरोपी उनका पति भारतीय मूलका जादव पक्राउ
Visitor from US is reading बोस्टनका नेपाली माथि बालिका बलात्कारको अभियोग पछि फरार
Visitor from RU is reading nepali CDs
Visitor from RU is reading Classifieds Summary: Jobs in PA, Room/Apt in CA,NY,VA
Visitor from US is reading Anand Bist: गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थालाई क
Visitor from RU is reading Please contact for mentioned.
Visitor from RU is reading Managers oppurtunity
Visitor from US is reading need job in north texas
Visitor from US is reading Chicago--which Dashain party to go to?
Visitor from RU is reading What do you think of United Zone of Nepal?
[VIEWED 23452 TIMES]
Posted on 10-07-18 11:11 AM Reply [Subscribe]
गठिलो ज्यान । मधुर हाँसो । शालीन । यस्ता व्यक्तित्वभित्र बेइमानी लुकेको छ भन्ने कसले अनुमान लगाउला र ! तर, उनीमाथि लागेका आरोप सुन्दा मात्रै पनि आङ सिरिंग हुन्छ ।
पाँच वर्षसम्म नाबालिकासँग अविच्छिन्न सहवास । ज्यान मार्ने धम्की । सांघातिक हमला । ४७ वर्षे नवराज कोइरालाले अमेरिकाको एउटा अदालतमा यस्तै संगीन आरोप खेपिरहेका छन् । उनले एक बालिकामाथि अमेरिकामा यस्तो निर्मम कृत्य गरेको अभियोग छ । बालिका ९ वर्ष हुँदादेखि १४ वर्षकी हुन्जेल कोइरालाले बलजफ्ती गरेको आरोप लागेको छ ।
घटनाबारे कसैलाई भने बालिकालाई मात्रै होइन, परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत मारिदिने धम्की दिएपछि लामो समयसम्म यो कुकर्म गुपचुप राख्न बाध्य भइन् । चञ्चले उमेरमा बालिका झन्झन् उदासी बन्दै गएपछि आफन्तले सोधीखोजी गर्दा ‘डिप्रेसन’ को औषधी खाइरहेको भेटियो, पाँच महिनाअघि मात्र । त्यसपछि मात्रै किशोरीलाई यति ठूलो विपत्ति आइपरेको तथ्य खुलेको थियो । पीडित किशोरी अहिले १६ वर्ष पुगिन् । तर, बलात्कारको चोटबाट उनी यति गलेकी छिन् कि मानसिक सन्तुलन सही हालतमा छैन । उनलाई अहिले अमेरिकाको बोस्टनस्थित पुन:स्थापना केन्द्रमा राखेर उपचार गरिँदै छ ।
विदेशी नागरिकलाई दिने डाइभर्सिटी भीसा (डीभी) पाएर सन् २००८ मा अमेरिका पुगेका कोइरालाले कलकलाउँदी बालिकालाई यो अवस्थामा पुर्‍याएको दाबी पीडित पक्षको छ । उनको परिवार अहिले पनि म्यासाचुसेट्स राज्यको राजधानी बोस्टनमै छ ।
कोइरालामाथि फस्ट डिग्री अपराध गरेको आरोप लगाइएको छ । अमेरिकामा ९ देखि १४ वर्षका बालबालिकाप्रति हुने अपराधमा ‘फस्ट डिग्री’ कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ । यो दफा आकर्षित हुनुलाई बालबालिकामाथिको क्रूर अपराध मानिन्छ । कडा कानुनी कारबाहीको तयारी भइरहेकै बेला कोइराला भने भागे ।
फरार भएपछि उनका एकपछि अर्को गैरकानुनी क्रियाकलापका शृंखला देखिन थाले । नेपालको गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत काम गरेका कोइराला अत्यन्तै चलाख रहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । उनको स्थायी ठेगाना हो, मोरङ ।
बलात्कारमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि बोस्टनको एभरेट पुलिस डिपार्टमेन्टले अदालतको अनुमतिमा नवराजलाई पीडित पक्षसँग भेट्न रोक लगायो । तर, नवराजले पीडित पक्षलाई भेटेनन् मात्र, मुद्दा फिर्ता लिए सम्पूर्ण सम्पत्ति दिने प्रलोभनसमेत देखाए । उनले पीडित पक्षलाई प्रलोभन देखाएर पठाएको म्यासेज नेपालसँग सुरक्षित छ । यो म्यासेज नै उनले अपराध कबोलेको प्रमाणका रूपमा म्यासाचुसेट्स अदालतमा पेस भएको छ ।
त्यसपछि ‘म्यासाचुसेट्स सुपेरियर कोर्ट’ ले ११ सदस्यीय जुरी गठन गरेर मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढायो । उक्त जुरीले २४ जेठमा कोइरालालाई आजीवन कैदको निर्णय सुनाउनुअगाडि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अभियोगीलाई आरोपको रक्षा गर्ने सुविधा दिएर मात्र फैसला सुनाइन्छ ।
उनी अदालतमा उपस्थित नभएपछि मुद्दा अनिर्णित छ । द सोमरभिल न्यूज विक्ली नामक स्थानीय पत्रिकामा अदालतले यस सम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशित गर्‍यो । सूचना अनुसार कोइरालामाथि बलात्कार, ज्यान मार्ने धम्की दिएको र सांघातिक हमला गरेको आरोप लगाइएको छ । तर, यतिबेलासम्म कोइरालाले अमेरिका छाडिसकेका थिए ।
म्यासाचुसेट्स सुपेरियर कोर्टले द सोमरभिल न्यूज विक्ली पत्रिकामा निकालेको सूचना र नवराज कोइरालाको डीभी परेको राहदानी
अदालतमा हाजिर नभएपछि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अनुसन्धान थाल्यो । पत्नीले समेत कोइरालासँग सम्बन्धविच्छेद र सन्तानको भरणपोषणका लागि सम्पत्ति दाबीसहित ‘क्याम्ब्रिज फेमिली कोर्ट’ मा मुद्दा दर्ता गरेकी छन् ।
यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अर्को तथ्य खुल्यो । कोइरालाले अमेरिका मात्रै छाडेनन्, उनको र पत्नीको नाममा रहेको संयुक्त सम्पत्तिसमेत एक एसियाली बैंकमा स्थानान्तरण गरेछन् । पत्नीको हस्ताक्षर भने नक्कली थियो । १ लाख ८० हजार डलर र सेयर कोइरालाले अनधिकृत रूपमा स्थानान्तरण गरेको आरोपसमेत थपिएको छ । सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता हुनासाथै उनले अमेरिका छाडेका थिए । उक्त मुद्दा अदालतमै विचाराधीन छ ।
मुद्दा अगाडि बढेपछि कोइराला न्युयोर्कबाट नयाँ दिल्ली पुगेको देखिन्छ । नयाँ दिल्लीमा क्रेडिट कार्डबाट रकम निकालेको पुष्टि हुन्छ । त्यसपछि उनी कहाँ गए भन्ने अमेरिकी प्रहरीले समेत सुइँको पाउन सकेको छैन ।
दिल्लीदेखि एकाएक बेपत्ता बनेका कोइरालाले सात महिनापछि आफ्नो फेसबुकमा एउटा फोटो अपलोड गरे र लेखे, फिलिङ ज्वायफुल । उक्त स्ट्याटसमा कोइरालाले एक युवतीको फोटो राखेका छन्, जुन फोटो काठमाडौँबाट पोस्ट गरेका हुन् । त्यसको एक महिनासम्म पनि कोइरालाले नेपालमै रहेको फोटो सार्वजनिक गरेका थिए ।
कोइरालाको पारिवारिक स्रोतका अनुसार उक्त तस्बिर कोइरालाकी दोस्री पत्नीको हो । अमेरिका जाने लालचमा पारेर आफूभन्दा दोब्बर कान्छीसित कोइरालाले विवाह गरेका हुन् । नवराजले दोस्रो विवाह गरेको आमा रूपा कोइरालाले समेत पुष्टि गरिन् । तर, यो विवाह दर्ता भने भएको छैन । नेपालसँग टेलिफोनमा उनले भनिन्, “उसले अहिले विवाह गरेको छ । पहिलेकीसँग छोडपत्र गरेँ भन्थ्यो । मसँग त्यति सम्पर्क हुँदैन । उनीहरू के गर्छन्, मैले कसरी थाहा पाउनु ? केटाकेटी भए पो सोधीखोजी गर्नु ।” काठमाडौँतिर विवाह गरेको समेत उनले बताइन् । रूपा सप्तरीको फत्तेपुरमा बस्छिन् ।
रूपाको भनाइबाटै बुझिन्छ, एकातिर नवराजले पहिलेकी पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद नै नगरी अर्को विवाह गरे भने अर्कोतिर अमेरिकामा गरेको अपराध छोप्न नेपाललाई उपयोग गरिरहेका छन् । नवराज अहिले काठमाडौँतिर बसे पनि ठ्याक्कै ठाउँ आफूलाई थाहा नभएको आमा रूपाको भनाइ छ । जबकि, उनी नेपाल भित्रिएको अभिलेख अध्यागमन विभागसँग छैन । यसको अर्थ हो, कोइरालासित नेपालमा बस्ने भिसा छैन । अमेरिकी नागरिकता त्यागेका पनि छैनन् । सन् २०१५ मा भने उनी नेपाल आएको देखिन्छ । विभागका प्रवक्ता विष्णुहरि उपाध्यायका अनुसार दिल्लीमा भिसा लिएर स्थलमार्गबाट नेपाल आउन भने सकिन्छ ।
कान्छी पत्नी अहिले गर्भवती रहेको समेत नवराज नजिकका एक मित्रले दाबी गरे । उनी राजधानीको एक अस्पतालमा नर्स छिन् । कोइरालाले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट त चार महिनादेखि बन्द गरेका छन् नै, दोस्री श्रीमतीको एकाउन्टसमेत निष्क्रिय छ । तर, न्यायिक प्रक्रिया सक्रिय नै छ ।
पीडित परिवारलाई कानुनी लडाइँमा सहयोग गरिरहेका अमेरिकामा बस्ने एक नेपालीका अनुसार आरोपितलाई अमेरिका झिकाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको छ । “अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ,” बोस्टनस्थित नेपाली समुदायका पूर्वपदाधिकारीसमेत रहेका ती व्यक्तिले नाम नबताउने सर्तमा भने । नेपाल–अमेरिकाबीच सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले मानिस पक्रेर हस्तान्तरण गर्न सहज भने छैन । सोही कारण नेपालमा गरेको अपराधबाट बच्न थुप्रै नेपालीले अमेरिकामा आश्रय लिने गरेका छन् ।
अमेरिका । अमेरिकाका एक अदालतले नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिकले बालिकालाई वर्षौंसम्म पटक–पटक बलात्कार गरेको अभियोग लगाएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रले छापेको छ । प्रहरीले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
उक्त मुद्दा हेर्ने सरकारी वकिलका अनुसार बोस्टनको एभरेट टाउनमा बस्ने ४६ वर्षीय अभियुक्त नवराज कोइरालाले एक बालिकालाई ९ देखि १४ वर्षको उमेरमा पटक–पटक बलात्कार गरी ज्यान मार्ने र यो कुरा अरुलाई भनेमा सबै परिवारलाई मारी आफू पनि मर्ने धम्की दिँदै आएको समाचारमा छ ।
अदालतबाट हालै जारी सार्वजनिक सूचना (जुन समर्भिल विक्ली न्युज पपेरमा समेत प्रकाशित छ) का अनुसार कोइरालाले बालिकालाई कठोर यातनासहित जबरजस्ती बलात्कार गरेको, १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई संघातिक आक्रमण र हमला गरेको, कोर्टको आदेश उल्लंघन गरेकोजस्ता संगीन आरोप लगाइएको छ ।
नेपालमा अध्यागमन विभागका अनुसार उनी सन् २०१५ मा मात्र वैधानिक रुपमा नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा २ पटक नेपाल गए पनि स्थलमार्गबाट बिनाभिसा गएकाले कुनै अभिलेख देखिएको छैन । जबकि नेपाल जानासाथ एक हप्ताभित्र उनले धोकापूर्ण विवरण दिएर गत डिसेम्बरको पहिलो हप्ता आफूभन्दा २५ वर्ष कान्छी शर्मा थरकी एक महिलासँग मन्दिर गई विवाह गरेका थिए ।
उनको खोजी हुने र अवैध बसेको पाइए देशनिकाला हुने एक अध्यागमन अधिकारीले बताए । समाचार स्रोतका अनुसार न्युयोर्कस्थित एक वकिलले नेपाल सरकारसमक्ष निज कोइरालाको अध्यागमन र सुपुर्दगी प्रक्रियाका लागि दुवै देशका सरकारी निकायमा सम्पर्क गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ ।
Middlesex county District Attorney report
Nabaraj Koirala, 46, was charged with aggravated rape ofachild, rape ofachild by force, indecent assault and battery onachild under the age of 14, and violatingarestraining order. The Assistant District Attorney is Marisa Tagliareni.
Last edited: 07-Oct-18 11:28 AM